နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် အကောင်းဆုံး ပညာသင်ဆုများ - Myanmar Network
Posted by Tin Nyunt on August 4, 2012 at 9:38
Scholars4dev.com မှာ ဂုဏ်သိက္ခာ အရှိဆုံး နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆု ပရိုဂရမ် ၁ဝ ခုကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးက စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ ဆက်သွယ်ကြပါလို့လည်း တိုက်တွန်း ထားတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံက ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ ကိုယ်တိုင်လည်း တော်တယ်၊ လေ့လာသင်ယူချင်စိတ် ပြင်းပြတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားရင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ပညာသင်ဆု တွေကို လေ့လာကြိုးစား ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
အစိုးရ ရံပုံငွေဖြင့်ပေးအပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ပညာသင်ဆုများ
ဒီပညာသင်ဆုဟာ အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၅ နိုင်ငံ အပြန်အလှန် ကျောင်းသားများ လဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်အရ ပေးအပ်တဲ့ ပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှကျောင်းသား ၁၈ဝဝ လောက် ခေါ်ပါတယ်။ ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး Master သို့မဟုတ် PhD ဘွဲ့တွေကို အမေရိကန်မှာ ဆက်လက်ရယူလိုသူတွေ ဖြစ်မယ်။ ဒီပရိုဂရမ်က ပညာသင်နေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံး အပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်။ ကျောင်းလခ၊ စာအုပ် စာတန်းကြေး၊ လေယာဉ်စရိတ်၊ နေထိုင်စား သောက်စရိတ်နဲ့ ကျန်းမာရေးစရိတ်တွေအား လုံး အလုံအလောက်ထုတ်ပေးတယ်။
ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ အထင်ကရ ပညာသင်ဆုပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် နိုင်ငံပေါင်း ၁၃ဝ ကျော်က ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ကျောင်းသားပေါင်း ၁ဝဝဝ ခန့်ကိုပေးတဲ့ ပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်မှာ ဘွဲ့လွန် သင်တန်းတွေကို ဆက်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပညာသင်ဆုကလည်း ကျောင်းလခ၊ လစဉ် နေထိုင် စားသောက်စရိတ်နဲ့ အခြား ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အပြည့်ပေးထားတယ်။ ဗြိတိန်နဲ့ အခြားနိုင်ငံ တကာသွားရောက်တဲ့ ခရီးစရိတ်တွေပါရတယ်။
ဩစတြေးလျအစိုးရအနေဟာ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေကို ယှဉ်ပြိုင်စနစ်နဲ့ ပေးတဲ့ဆုဖြစ်တယ်။ အရည် အချင်းရှိသူတွေကိုသာ ပေးတဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပြီး အာရှ-ပစိဖစ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ ကရေဘီယံ၊ ဥရောပနဲ့ အမေရိကကျောင်းသားတွေ လျှောက်ထားနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဩစတြေးလျမှာ သုတေသနနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ကြရတယ်။ ကျောင်းလခ၊ လစဉ်နေထိုင် စားသောက်စရိတ်၊ ခရီးသွားခွင့်၊ စာအုပ် စာတန်းကြေး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေ ရရှိတယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ပညာသင်ကြားမှုဆိုင်ရာ လဲလှယ်ရေးအစီ အစဉ် (DAAD) အဖြစ် နိုင်ငံခြားသားတွေကို ပေးအပ်တဲ့ ပညာသင်ဆုဖြစ်တယ်။ ဘွဲ့ရပြီးသူတွေ၊ ပါရဂူဘွဲ့လိုချင်သူတွေ၊ သုတေသန ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ချင်သူတွေ၊ လူငယ် ပန်းချီ၊ ဂီတ၊ ပါဖောင်းမန့်အနုပညာ လေ့လာချင်သူတွေအတွက် ပေးတဲ့ဆုမျိုးပါ။ ပညာသင်ဆုအလိုက် ထောက်ပံ့တဲ့ငွေ ပမာဏ ကွာခြားမှုရှိတယ်။ ခရီးသွားခွင့်၊ ဆေးကုသခွင့်၊ မတော်တဆ အာမခံ၊ ပုဂ္ဂလိက သို့မဟုတ် အစိုးရစာကြည့်တိုက်သုံးခွင့် တွေပါတယ်။ DAAD ဆုကို နှစ်စဉ် နိုင်ငံ တကာကျောင်းသား ၇ဝဝဝဝ ကျော်ရွေးချယ် ပေးလေ့ရှိတယ်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအစိုးရကပေးတဲ့ ဆုဖြစ်တယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနဲ့ ပူးပေါင်းထားတဲ့ နိုင်ငံခြား ကျောင်းသား တွေကို ခေါ်ယူတယ်။ ဘွဲ့လွန်အတွက် ဆက်ပြီးကျောင်း တက်ချင်သူတွေနဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင် ချင်သူတွေအတွက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေက ငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီး အသိအမှတ်ပြုပေးတယ်။ လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေး ဆွစ်ဇာလန်သုံးငွေ ၁၆ဝဝ မှ ၁၉၃ဝ အထိရရှိတယ်။ နှစ်စဉ် သင့်လျော်တဲ့ လျှောက်လွှာ ပေါင်း ၁ဝဝဝ ကို လက်ခံပြီး အဲဒီလျှောက်လွှာတွေထဲကမှ ၅ ပုံ ၁ ပုံ (၂ဝဝ) လောက်ကိုပဲ ပညာသင်ဆုရွေးချယ် ပေးလေ့ရှိတယ်။
ပြင်သစ်အစိုးရကပေးအပ်တဲ့ ပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားက အထက်တန်းလွှာ လူကုံထံတွေကိုပဲ ပေးလေ့ရှိတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ မာစတာတန်း၊ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နဲ့ PhD ဘွဲ့တွေလာရောက်သင်ကြားဖို့ မက်လုံးပေးထားတဲ့ ပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ အီဖဲလ်ပရိုဂရမ်ဟာ ကျောင်းလခကို အလုံအလောက် မထောက်ပံ့ပါဘူး။ ဒါပေ ယ့် လစဉ် ခရီးသွားခွင့်၊ ဆေးကုသခွင့်၊ တည်းခိုနေထိုင်ခွင့်တွေကိုတော့ ပေးထား တယ်။ နှစ်စဉ် ကျောင်းသား ၄ဝဝ လောက် ပဲခေါ်တယ်။
Cecil Rhodes ဆိုသူက ၁၉ဝ၂ ခုနှစ် ကတည်းက ထူထောင်ထားခဲ့တဲ့ ပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ပညာသင်ဆု တွေထဲမှာတော့ ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သလို ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံးဆုလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။ ဘွဲ့လွန်အတွက် အဓိကထားပြီးတော့ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ တကယ့်လက်ရွေးစင်တော်သူ တွေဖြစ်ရပြီး၊ အောက်စ်ဖို့်ဒ်တက္ကသိုလ်လို ကျောင်းမျိုးမှာ တက်ရောက်ပညာသင်ယူစေပါတယ်။ ကျောင်းစရိတ်အားလုံး လောက်နီးပါး တာဝန်ယူတယ်။ နေထိုင်စားသောက် စရိတ်၊ ဆေးကုသခွင့်၊ နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ လေယာဉ်စရိတ် တွေ အားလုံးထောက်ပံ့တယ်။ နှစ်စဉ် ကျောင်းသား ၈၅ ဦးပဲရွေး ချယ်တယ်။
အဖွဲ့အစည်းများမှပေးအပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ပညာသင်ဆုများ
Comment by ZawHtutYin on June 10, 2013 at 11:48
Thanking for your posted
Comment by Myat Marlar Tin Moe on March 9, 2013 at 15:11
Comment by Minthuoo on March 3, 2013 at 16:57
Other best scholarships are
2) Swedish Institute Scholarship
3) Europubhealth Scholarship
4) New Zealand ASEAN scholarship
5) APSC scholarships
6) World Bank Scholarships
7) Belgium Ghent Scholarships
8) Asia Development Bank Scholarship
9) PB/ Myanmar MPH scholarship
10) AIM Phillipine Scholarship
11) KOIKA scholarship
12) China Government Scholarships
13) LKY Public Policy Scholarships
14) Malaysia Government Scholarships
15) Brunei Durrusalam Scholarships
16) Taiwan Higher Education Scholarship
17) China government scholarships
18) AIT Norway government scholarships in Thailand
19) Turkish Government Scholarships
Just google on the internet,, so much opportunities
There are so many scholarships for Myanmars for development :)
Comment by Naing Naing Win on January 25, 2013 at 9:06
It is really useful. Thanks!!!!!
Comment by Phone Suu Khaing on December 28, 2012 at 15:20
Actually, Myanmar network isapriceless network foraMyanmar student! I believe the admin will upload update information for everyone so that we could broaden our knowledge to guide our way.
Comment by N Moi Ja Bu on November 22, 2012 at 14:53
Comment by mgchantha on October 1, 2012 at 21:15
Really thanks Myanmar Network.
To get full scholarship.
Comment by Khine Nyein on September 13, 2012 at 17:53
I am also interested in Scholarship Programs, but I think, many people do not all these program in time.So, I think they need to know update informations.
Comment by Gam Shawng on August 21, 2012 at 11:29
I'm very interested in full scholarship.
Comment by Yin Min Soe on August 19, 2012 at 22:31
I am interest but I can't open link.